Zoma 30 Aprily 2021
Endrika Ity sefi-jotra apetraka ity dia natao hifaneraserana amin'ny olona amin'ny nofy andro. Nalamina ny lavaka ary namboarina avy amin'ny voninkazo, lamosina, na lohahevitra izay narafitra tamin'ny endriny isan-karazany. Ny tarehin-jiro dia taratra ary manova ny feon'ireo lohahevitra naseho ary mifandray aminy ny olona.
Ny Saron-Tava Io endrika io dia aingam-panahy amin'ny fanehoana micro. Nifidy an'i Billy sy Julie ho an'ny karazan-toetra roa samihafa i Billy sy Julie. Ny singa manintona dia noforonina amin'ny alàlan'ny fanitsiana parametrijika ny orientations amin'ny geometria mitovy amin'ny tohatra, miorina amin'ny curve somango miaraka amin'ny partitions. Amin'ny maha interface azy sy mpandika teny, ity saron-tava ity dia noforonina mba hahatonga ny olona handinika ny feon'ny fieritreretany.
Ny Mpanampy Makiazy
Alarobia 28 Aprily 2021
Ny Mpanampy Makiazy Ity famolavolana ity dia manadihady marika amin'ny volomaso. Ny mpamorona dia heverin'ny mpanaingo fa fikatsahana manokana. Mamorona fihenam-balahana izy ho toy ny mariky ny fiainana na ny fampisehoana fahantrana kely. Ity tsipika ity dia maneho ny fanoloran-tena fampahatsiahivana amin'ny maraina na alohan'ny hatory, amin'ny fametrahana eyelashes vetivety alohan'ny na aorian'ny fampiharana azy. Ny fijoroan'ny hodi-maso dia fomba iray hitadidiana hoe inona no zava-tsy misy dikany amin'ny zavatra niainana isan'andro.
Ny Fametrahana Lohahevitra
Ny Fametrahana Lohahevitra Ity famolavolana ity dia mifandray amin'ny lohahevitra naseho amin'ny modules. Ity lohahevitra miorina ity dia namboarina miaraka amin'ny fomba mivelatra mba hahafahana mampifandray azy enina na mihoatra amin'ny andiany marobe amin'ny làlana telo. Ny fanitsiana endrika maimaim-poana miaraka amin'ny tendro dia mahatonga ny fifandraisana mifandraika amin'ireo olona mandihiza mifampitohy. Ny fandaminana ny lavaka kely dia manangana rafi-trano fonenana ho an'ny taranja misy tsipika.
Alatsinainy 26 Aprily 2021
Jiro Latabatra Ity hazavana ity dia mitana andraikitra mavesatra hiarahana amin'ny olona ao amin'ny toeram-piasana manomboka maraina ka hatramin'ny alina. Izy io dia novorina niaraka tamin'ny fisainan'ny olona miasa tontolo. Ny tariby dia afaka mifandray amin'ny solosaina finday na banky herinaratra. Ny endrik'ilay volana dia vita tamin'ny faribolana telo amin'ny faribolana iray ho toy ny sary miakatra avy amin'ny sary terrain vita amin'ny rindrina matevina. Ny endrika modely amin'ny volana dia mampahatsiahy ny mpitari-dàlana amin'ny tetikasan'ny habakabaka. Toy ny sary sokitra amin'ny hazavana sy ny jiro mampita fampiononana amin'ny alàlan'ny fiatoana amin'ny alàlan'ny alina ny toerany.
Ny Jiro Louvre jiro dia jiro latabatra iraisan'ny aingam-panahy avy amin'ny herin'ny fahavaratra amin'ny alàlan'ny fahavaratra izay mandalo mora foana avy amin'ireo hikatona mihidy mankany Louvres. Nahazoana peratra 20, voahangy 6 ary Plexiglas 14, izay manova ny filaharana amin'ny fomba milalao mba hanovana ny fiparitahana, ny haavony ary ny aestetika farany ny hazavana araka ny filan'ny mpampiasa sy ny filàny. Mamirapiratra ny fitaovana ary miteraka fisaraham-bazana, ka tsy misy aloka miloko akory na ny eny manodidina azy. Ny fanaka miaraka amin'ny haavo samy hafa dia manome tombony azo tsikombakomba tsy misy farany, fanamboarana azo antoka ary fifehezana maivana tanteraka.
Endrika Ny Saron-Tava Ny Mpanampy Makiazy Ny Fametrahana Lohahevitra Jiro Latabatra Ny Jiro